I-Tactics De Marketing Numérique I-Persuasives Pour Booster Ukusebenza Kwakho - I-Les Préoccupations De-Expert Expert
Ukumaketha kwamanani kubandakanya ukukhangisa nge-email, le-referencement, la publicité en ligne, les médias sociaux et la conception des sites Web. Cela iveze umfutho wezinkampani ezizimele zendawo ezifuna umthengisi kuphela kanye nezindawo ezithintekayo. Ngokuvamile, lawa osomabhizinisi abambelele kakhulu ekufuneni izindlela zokukhangisa ezithuthukisayo ezithuthukisa izinkampani zabo.
Kuleyo nhlangano, uNkk Chaykovskiy, iMenenja yeMpumelelo Yomthengi Omkhulu we-Semalt, uchaza ngamanani omaketha amakhemikhali okubaluleke kakhulu okungenziwa ngu-entreprise ngo-2017. Lezi zindawo zokuzibandakanya ezinkampani ezinjenge-avocats, ama-dentistes, Lezi zindlela eziwusizo kakhulu.
1. Bhalisela i-Google + Izibuyekezo ze-Google Play manje zisebenzisa i-Google + ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo.
Isici ngasinye sokumaketha kumele sithumele i-intanethi ye-intanethi ku-intanethi ye-web site. Cela kufanele ibhekwe njengento ebaluleke kakhulu. Amanethiwekhi amaningi ayenziwe nge-design engaphenduli, okusho ukuthi bazimisele ukuhamba ngezinsimbi ezinjenge-mobiles et semblent. Lolu hlelo lubonisa ukuthi ngaphezu kwama-43% wekhasimende elihamba phambili liphuma ezinkampanini zamaselula futhi le le chiffre kufanele i-augmenter. Ngakho-ke, un site d'entreprise kufanele ube ukukhangisa nge un navigation lula phezu gadgets mobiles. Izivakashi kumele zikwazi ukufaka ikheli le-imeyli noma inombolo yocingo ukuze uxhumane nomnikazi we-akhawunti. Ngaphezu kwalokho, uma amakhasimende kufanele abhalise, qhafaza izinkampani zezinkampani ezizothola izinkampani ezithuthukisiwe. Ngakho-ke, ukuhumusha izivakashi zakho nge-imeyili, ucingo noma ucingo.
2. Exécutez des «ukuphendula impendulo» kuwebhusayithi
Les gens changent manje bathi bayisebenzisa kanjani i-Google..I-Visendeurs ayifuni neze ukubuka ukuthi uthola ulwazi kodwa u-Google uthele imibuzo yakho. Njengoba i-enterprise, i-Google ihlinzeka ngalezi zinsuku ngokufaka "izimpendulo zempucuko" ku-algorithm de recherche kanye nokuthuthukisa i-SEO experience. Cela ukunikeza iziphumo kanye nesimo esilandelayo. Kule nkampani, yonke indawo yomkhakha wemininingwane yimibuzo evame ukuxhumana nabo njalo. Ngakho-ke, kungaba ukujabulela ukufaka izimpendulo zempendulo kwi-website ye-Web d'entreprise ukuze zivele kuqala uma i-Google isibuzwa.
3. Sebenzisa ama-social media ngokuhlakanipha
Ukumenyezelwa, labaningi bezinkampani ezizimele baqedwa ngesikhathi sokunquma izinkampani ezisebenzisayo kanye nokuphawula ukuthi kufanele kube khona. Kunesimiso esibalulekile ukuqonda kwakho clientèle. Les médias sociaux ne sont pas un nouveau concept. Thenga isikweletu se-Google Play Kuvele iphutha elingalindelekile. Sicela uzame futhi emva kwesikhathi. Ngaphandle kwalokho, i-affichage sur les médias sociaux yakha lula ukukhulumisana ne-entreprise kanye nokuxhumana nabantu abaqotho. Ngakho-ke, umuntu osomabhizinisi kufanele aqinisekise ukuthi akudingeki ukuba akwazi ukukhushulwa kanye nokukhushulwa.
4. Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo
Kule minyaka embalwa, ukukhangisa nge-imeyili kuvezwe eceleni kokuvula i-voie au marketing sur les médias sociaux. Nokho, uthele izinkampani zendawo, ukukhangisa nge-email kuyinto enhle kakhulu futhi ukhethe ukuxhumana namakhasimende. I-Instagram kanye ne-Facebook imilayezo ye-imeyli ithela ingxenye eyodwa yama-abonnés. Bafuna ukukhokhela abadlali bakho. Un entrepreneur angakwazi ukuthumela mahhala izinto ezintsha ze-menu, imininingwane ye-événements et des offres spéciales en utilisant le courrier électronique. Ukusetshenziswa kwe-MailChimp kuvumela ukuthi u-un propriétaire d'entreprise d'envoyer imilayezo kubangu-2 000 othintana nabo abasebenzisa i-plate-forme marketing form efficace.
Ekuphetheni, abaphathi bezinkampani zendawo bahlale beqhamuka kuzo zonke izinsizakalo ze-Web d'entreprise ukuze baqinisekise ukuthi izinsizakalo zabo ziyasebenza. Ezinye izinkomba zokumaketha digital zingasetshenziswa ukufaka for generator du trafic vers le site.